बलवालाई स्मार्ट नगरपालिका बनाउदै मेयर यादव - नयाँपुल अनलाइन डटकम
बलवा नगरपालिकाका मेयर बिनोद कुमार यादवले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिदा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भएको छ । आज असल सञ्चारको स्टुडियो कुराकानी गर्दै मेयर यादवले यस्तो बताएका हुन । प्रस्तुत छ, मेयर यादवसँग गरिएको कुराकानी :
बलवा नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले अहिलेसम्म विकासका लागि के कस्ता कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको छ ?
बलवा नगरपालिकामा खास गरी पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेका छौं । पूर्वाधार भन्ने बितिकै सडक, भवन, खानेपानी, सरसफाई, सिँचाइ, नदि नियन्त्रण, सार्वजनिक शौचालय निर्माण जस्ता मुल कुरा नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन । त्यसपछि दोस्रोमा हामीले कृषि क्षेत्रको बिकास सँगसँगै कृषि व्यवसायबाट आर्थिक विकासतर्फ उन्मुख हुने कार्यको पनि थालनी गरेका छौं । त्यस्तै तेस्रोमा, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने हो । हाम्रो नगरपालिका पर्यटन हिसाबले पनि सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो । बलवा नगरपालिका धार्मिक पर्यटनमा प्रख्यात छ । यहाँको कालिकास्थान मन्दिरमा प्रत्येक सोमबार र मंगलबार पूजा कार्यक्रम हुन्छ । उक्त मन्दिरमा पूजाको लागि नेपालबाट भन्दा पनि भारत र बंगलादेश बाट धेरै तिर्थयात्रीहरू आउने गरेका छन् । यस हिसाबले बलवा नगरपालिकालाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना मैले देखेको छु ।
यस्तै, नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूलाई थप गुणस्तरीय बनाउने क्रियाकलपहरू त हामीले गरिसकेका छौँ । आधारभूत तहमा त फड्को मारिसकेको पनि छौं । माथिल्लो तहमा पनि गुणस्तर बनाउने प्रयत्न गर्दैछौं । बिद्यालयको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने, शिक्षकको ब्यवस्थापन गर्ने लागायतका कामहरू भइरहेका छन ।
काम गर्ने जुन अपेक्षा गरेर जानुभएको थियो, त्यो अपेक्षा पुरा भएको छ त ?
हामीले जति जे सोचिएको थियो, त्यति सहज त भएको छैन । पहिलो कुरा त हामी आफैं बस्ने कार्यालय व्यवस्थापन भएको छैन । कार्यालय व्यवस्थापन नभएपछि कर्मचारी, प्रशासन, कार्यालयबाट दिने सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त हुँदैन । त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । यसलाई हामी चुस्त दुरुस्त बनाउन पर्छ । कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसकारण जति सहज हुनुपर्ने थियो त्यो चाँहि भएको छैन । संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकता नदिदा बिकासका काम गर्न समस्या भएको छ ।
नगरपालिकालाई बार्षिक ५० करोडको हाराहारीमा बजेट त आउछ । तर पदाधिकारीको तलव भत्ता, कर्मचारीको तलव आदीमा आधा रकम सकिन्छ त्यस्तै ११ वटा वडामा बाँकी रकम बिनियोजन गर्दा सोचे अनुसारको बिकास गर्न सकिएको अवस्था छ । तर पनि नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत लगायत अन्य बजेटले एउटा स्काभटेर किनिएको छ, अब सडक निर्माण तथा स्तरोन्तीको कामले पनि तिब्रता पाउनेछन । हामीले जनता समक्ष राखेको प्रतिबद्धता अबको ५ वर्षमा विकासका कामहरू पुरा गर्ने छु । जनतालाई म यहि सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।
तपाईंको स्थानीय तहमा गरिहाल्नु पर्ने काम के–के छन् ?
अहिले बलवा नगरपालिकाको प्रमुख समस्या भनेको खानेपानीको हो । पानी लिनको लागि २/३ घण्टा हिडेर जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तै, नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा सडक, बाटो जस्ता कुराहरूबाट बञ्चित भएका समुदायहरूलाई तत्काल सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ ।
यहाँका जनता स्थानीय सरकारको कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट छन् ?
हामीले गरेको कामबाट यहाँका जनता सन्तुष्ट नै देखिएका छन् । तर पनि अहिलेको समय भनेको सुरूवाती अवस्था नै हो । जनतालाई भनेर होइन गरेर देखाउने समय आएकोले हामी काम गरेर देखाउँछौं । जनताले विकास भएको महशुस हुन थालेपछि सन्तुष्ट नै हुन्छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा बलवा नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने सोच बनाउनु भएको छ ?
बलवा नगरपालिकालाई राम्रो र सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो चाहना छ । यो नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने लक्ष्य लिएको छु । सोही लक्ष्य अनुसार स्मार्ट सिटीको लागि १० करोडको बजेट पनि बिनियोजन भईसकेको छ । मेरो कार्यकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र बाटोघाटो निर्माण लगायतका कामहरू अगाडि बढाएर बलवा नगरपालिकालाई स्मार्ट नगरपालिका बढाउनेछु ।